नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीबाट तीन पुल निर्माण - Kantipath.com
नगरपालिकाले नगर गौरवका आयोजनामा पारेर ती पुल निर्माण गरेको हो । “कोरोना भाइरसले गत वर्ष केही ठूला योजना पूरा हुन पाएनन्”, नगरप्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, “कोरोना कहरका बीच पनि नगर गौरवका आयोजनासहित अन्य योजनाका काम धमाधम भइरहेका छन् ।”
खैरहनी–९ को सिमलटाँडीदेखि दक्षिणतर्फ सुल्तनामा रु. दुई करोड २४ लाखको लागतमा पुल निर्माण गरिएको छ । खैरहनी–७ र ९ लाई जोड्ने सो पुलले दुवै वडाका बासिन्दालाई आवागमन गर्न सहज भएको छ । केबीसी विल्डर कम्पनी भरतपुरले ठेक्का सम्झौता गरेर काम गरेको थियो ।
खैरहनी–२ लदरा खोलामा रु. एक करोड ९५ लाखमा जीएमआर कन्स्ट्रक्सन प्रालि भरतपुरले पुल निर्माण गरेको नगरपालिका योजना शाखा प्रमुख इञ्जीनियर सुमन श्रेष्ठले बताउनुभयो । लदरी पुलको एप्रोज स्लाब ढलान र पुलको दायाँ बायाँ जाली लगाउने काम बाँकी छ । सो पुलबाट खैरहनी–२, ३ र ४ का स्थानीयवासी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।
त्यस्तै सडक बोर्डको गलत डिजाइनका कारण खैरहनी–९ चात्रा खोलामा निर्माण हुन नसकेको पुल नगरपालिका आफैँले बनाउँदै छ । रु. एक करोड सात लाखमा सम्झौता भएकामा अहिले निर्माणको काम भइरहेको छ । एमआरएन्ड गु्रप डीएनवी जेवी भरतपुरलाई ठेक्का परेको हो । सो पुलको पनि एप्रोज स्लाब ढलान, जाली लगाउने र रेलिङ हाल्ने काम बाँकी रहेको इञ्जीनियर श्रेष्ठले बताउनुभयो । पुल निर्माणपछि खैरहनी–९, राप्ती–८ र ९ का स्थानीयवासीलाई बजार आवतजावतमा सहज हुनेछ ।
एकै वर्षमा २३ किलोमिटर कालोपत्रे
चितवनको कालिका नगरपालिकाले एक वर्षमा २३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा नगरका अधिकांश मुख्य सडक कालोपत्रे गरेको हो । नगरपालिकाका पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख इञ्जीनियर राजेश कोइरालाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७७र०७८ मा २९ वटा सडक निर्माणको क्रममा रहेका छन् । यी सबै योजना रु २० लाखभन्दा माथिका रहेको उहाँले बताउनुभयो । तीन सडकको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्य निर्माणको चरणमा छन् । नगरपालिकाले रु. १३ करोड ९६ लाख सडक निर्माणका लागिमात्र विनियोजन गरेको छ ।
जनप्रतिनिधि आएपछि नगरपालिकामा सडक कालो पत्रेमा कायापलट नै भएको हो । नगर प्रमुख श्रेष्ठले नगरपालिकाका वडा नं १० र ११ का मुख्य सडक कालोपत्रे हुन बाँकी रहेको र यसै वर्ष काम सम्पन्न गरिने बताउनुभयो ।
Previous Previous post: बजेट विनियोजनको विवरण माग
Next Next post: एमालेका मन्त्रीको पद खुस्किदा एमाले मै खुसियाली, चोकचोकमा दिप प्रज्वलन